News - Dhamma Viman
Sayadaw U Nandavamsa
2013 ကာလ ပွဲတော်များ
Sturday, March 9, 2013
Buddha's Birthday (For Youth Only)
မြတ်ဗုဒ္ဒမွေးနေ့ (လူငယ်များ အတွက်သာ)
Thingyan Festival + Myanmar New Year
Warso Ceremony and Ordination Ceremony
၀ါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲနှင့် ရဟန်းခံ၊ ရှင်ပြု၊သီလရှင်၊ ယောဂီ ၀တ်ပွဲ
Thitin Kyut Ceremony
သီတင်းကျွတ် ဆီမီးထွန်းပွဲ (ညနေခင်း)
Click here to read about the Dhamma Viman Monastery and
ရန်ကုန်မြို့ ၊မိုးညှင်းသိဂီ င်္ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်
posted Jun 25, 2013, 8:05 PM by Dhamma Viman [ updated Jun 28, 2013, 5:45 AM ]
မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်ပပြီးစီး
posted May 29, 2013, 5:04 AM by Dhamma Viman [ updated May 29, 2013, 5:06 AM ]
ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်း တွင်ကျင်းပသော မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲနှင့်သင်္ကြပွဲတော်ကို မေလ ၂၆ရက်နေ့ တွင်အောင်မြင်စွာကျင်ပပြီးစီးခဲ့ပါသည်၊ ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုများကို သွားရောက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်၊
Invitation to Myanmar Thingyan 2013 သင်္ကြန်
posted May 9, 2013, 4:48 PM by Dhamma Viman
မြန်မာ့ ရိုးရာ အတာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဟိုက်ပွိုင့် (ဂျိမ်းတောင်း) မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက် တွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်နီး ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေများအား ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ် ကြားအပ်ပါသည်၊
ရိုးရာ ကရင်ဒုံးယိမ်းအကများ ၊သင်္ကြန်ယိမ်းအကများ အပြင် တေးသံရှင် အဆိုတော် နီနီဝင်းရွှေ မှ အားဖြည့် သီဆိုဖျော် ဖြေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်၊
မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက် အစုံအလင်ဖြင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်လည်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်၊
You are cordially invited to participate in Myanmar Thingyan Festival at Dhamma Viman Myanmar Buddhist Monastery in North Carolina.
High Point Thingyan 2013 Schedule;
Date : May 26, 2013 Sunday
Place : 6612 Brass Road, Jamestown, NC 27282
Entertainment of Burmese traditional music, songs, dances, splashing water over each other and fundraising food sale for Dhamma Viman Monastery.
Special Performance by Ni Ni Win Shwe, the renown Burmese Singer.
posted Apr 28, 2013, 2:33 PM by Dhamma Viman
၂၀၁၃ ခုနှစ် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို မေလ ၂၆ ရက် နေ့တွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်၊
တတိုင်းရ ဘုရားပွဲကြီး အောင်မြင်စွာကျင်းပ
posted Mar 11, 2013, 5:20 AM by Dhamma Viman
တတိုင်းရဘုရားပွဲ တော်နှင့် ထမင်နှဲပွဲတော် ကို မတ်လ ၉ ရက်နေ့ တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ မကြာခင်မှာ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယိုများ တင်ပြပေးသွားပါမည်၊
Kathina Ceremony ကထိန်ပွဲတော် Nov 17, 2012
posted Nov 4, 2012, 4:20 PM by Dhamma Viman
တနှစ်မှာတစ်ခါသာကြုံရသော မြတ်မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲကို Saturday Nov 17, 2012 တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါ သဖြင့် ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်၊
(၁) နံနက် ၁၁ နာရီ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်လှူရန်၊
(၂) နေ့ ၁၂ နာရီ ဓမ္မမိတ်ဆွေးများ အား စားသောက်ဖွဲရာများ ဖြင့်တည်ခင်းရန်
(၃) နေ့၁ နာရီ သီလယူ၊ ကထိန်သင်္ဃန် စုပေါင်းကပ်လှူ၊ ပရိတ်ရွတ်၊ တရားနာ ရေစက်ချ အမျှ ပေးဝေရန်၊
ပွဲတော်မှာ ပြုနိုင်သော ကုသိုလ်များ..
- ကထိန် သင်္ကန်းတစ်စုံ လျှင် ဒေါ်လာ ၅၀၊
- ပင့်သံဃာ ၇ ပါး တစ်ပါးလျှင် လှူဖွယ်ပစ္စည်းနှင့် န၀ကမ္မ၀ထ္ထုအလှူငွေ ဒေါ်လာ ၁၅၀၊
- စားသောက်ဖွယ်ရာ တစ်မျိုး၊
- စုပေါင်း ကထိန်ပဒေသာပင် အလှူ၊
- ကျောင်းပင်မ သထ္ထုငွေအလှူ၊
- ကျေင်းသံဃာ့ န၀ကမ္မ ၀ထ္ထုငွေအလှူ၊
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးတစ်ခန်း လျင် ($100) အလှူ၊
ယခုပွဲ ပင်မ စတုဒိသာဆွမ်းနှင့် ဥတ်ကထိန် သင်္ကန်းကြီး အလှူရှင်
ဦးညွန့်ဆွေ (Jack) နှင့် ဒေါ်ရွှေနီ
သား မောင် ဥာဏ်မွန်ဦး
You are cordially invited to participate in Kathina Ceremony on Saturday Nov 17, 2012 at 6612 Brass Road, Jamestown NC 27282.
သီတင်းကျွှတ်မီးထွန်းပွဲ နှင့် တရားပွဲ
posted Oct 3, 2012, 5:24 PM by Dhamma Viman [ updated Nov 4, 2012, 3:58 PM ]
သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ နှင့်တရားပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါ သဖြင့် ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်၊
You are cordially invited to participate in Thitinkyut ceremony and Dhamma talk ( Light offring ceremony) on Saturday evening Oct 20, 2012 at 6612 Brass Road, Jamestown NC 27282.
Dhamma Viman's News
posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by Dhamma Viman [ updated Oct 3, 2012, 5:46 PM ]
ဓမ္မဗိမာန် ဘုန်းကြီးကျောင်း သတင်းများကို ယခုနေရာမှာ ဖော်ပြပေးသွားပါမည်၊
We will be announce our Dhamma Viman News in here accordingly.